"Iza no lehilahy matahotra an’i Jehovah? Izy no hampianariny izay làlana tokony hofidiny. Salamo 25:12 Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana." 2 Timoty 3:16
Ny GPS dia fitaovana mpanoro lalana apetraka ao amin’ny fiara. Raha tsy nanaraka ny torolalana nomeny ianao, dia mahare ny teny hoe: «Miverena raha vao azo atao…». Matetika dia aleo manaraka ny toroheviny, ka miverina raha vao azo atao.
Eo amin’ny diantsika eto an-tany dia sendra sampanana maro isika. Raha mbola tanora dia efa misy safidy tsy maintsy atao, izay iankinan’ny hoavy: misafidy fianarana, asa, vady, toerana honenana. Ahoana no tsy haha diso lalana? Ho an'ny kristiana dia «GPS ara-panahy» ny Baiboly, izay lazain’ny mpanoratra Victor Hugo hoe «boky mirakitra ny fahendren’olombelona manontolo, hazavain’ny fahendren’Andriamanitra manontolo», boky noderainy kanefa tsy nankatoaviny. Ny Baiboly dia mitanisa fitsipika ankapobeny, nefa indraindray koa torohevitra tena voafaritra tsara, mba hananana fiainana sambatra, mirindra, eo ambany fitarihan’Andriamanitra. Ao anaty fiarahamonina miha-tsy manana soridalana arahina intsony, izay mampirisika hikatsaka fahafinaretana feno fitiavan-tena, tombon-tsoa, laza, dia efa atao tsinontsinona mihitsy ireo fitsipika napetrak’Andriamanitra. Ny kristiana dia mety hanaiky hotarihin’ny toe-tsain’ny manodidina azy, ka hanadino ny atao hoe tsara. Fa eo ny Soratra Masina hampahatsiaro izany aminy, handresy lahatra ny mpino nanao fahadisoana mba «hiverin-dalana», izany hoe hiaiky fa ratsy ary tokony hialana izay melohin’ny Baiboly, ka hitady ny fanampian’Andriamanitra mba hiverenana indray eo amin’ny lalana nosoritany.
“Izay mitsotra ka mahafoy [ny fahotany] no hahazo famindrampo” (Ohabolana 28:13).